Zekariya 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Chiratidzo 3: Murume ainge akabata tambo yekuyeresa (1-13)
Jerusarema richayerwa (2)
Jehovha achava rusvingo “rwemoto kumativi ese” (5)
Kugunzva mboni yeziso raMwari (8)
“Marudzi mazhinji achauya kuna Jehovha” (11)
2 Ndakasimudza musoro ndikaona mumwe murume ainge akabata tambo yekuyeresa.+ 2 Saka ndakati: “Uri kuenda kupi?” Iye akati: “Kunoyera Jerusarema, kuti ndione kufara kwaro nekureba kwaro.”+ 3 Ngirozi yaitaura neni yakabva pandaiva, uye imwe ngirozi yakauya kuzosangana nayo. 4 Yakabva yati kwairi: “Mhanya unoudza jaya iro kuti, ‘“Jerusarema richagarwa+ semisha yekumaruwa,* nekuti vanhu vari mariri vachawanda uye zvipfuwo zviri mariri zvichawanda.+ 5 Ini ndichava rusvingo rwaro rwemoto kumativi ese,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “uye kubwinya kwangu kuchava mariri.”’”+ 6 “Uyai! Uyai! Budai munyika yekuchamhembe mutize,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Nekuti ndakakuparadzirai kumhepo ina dzekudenga,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 7 “Uya iwe Ziyoni! Tiza iwe uri kugara nemwanasikana weBhabhironi.+ 8 Nekuti Jehovha wemauto, uyo akapiwa rukudzo achibva andituma kumarudzi aikupambai ati:+ ‘Anokugunzvai anogunzva mboni yeziso rangu.+ 9 Nekuti iye zvino ndichasimudza ruoko rwangu ndichivarwisa, uye vachapambwa nevaranda vavo.’+ Muchaziva kuti Jehovha wemauto andituma. 10 “Shevedzera nemufaro, iwe mwanasikana weZiyoni;+ nekuti ndiri kuuya,+ uye ndichagara mauri,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 11 “Zuva iroro marudzi mazhinji achauya kuna Jehovha,+ uye achava vanhu vangu; uye ndichagara mauri.” Uchaziva kuti Jehovha wemauto andituma kwauri. 12 Jehovha achaita kuti Judha ive mugove wake munyika tsvene, uye achasarudzazve Jerusarema.+ 13 Imi vanhu vese, nyararai pamberi paJehovha, nekuti abuda munzvimbo yake tsvene yaanogara kuti aite zvaakaronga.
^ Kureva kuti risina masvingo ekurikomberedza.